केशव विष्टः कला सपना, खेलकुद ’प्यासन’
नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कार्यकारी पद अर्थात् सदस्य सचिव भइसकेका केशव विष्टको कलाकारिता पाटो खुबै चाखलाग्दो छ ।
उनी अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रदेश १ का प्रदेश कमिटी सदस्य एवं इटहरी नगर कमिटीको इन्चार्जको जिम्मेवारीमा छन् । विष्टलाई खेलकुद महासंघको आगामी निर्वाचनका प्रत्यासीका रूपमा पनि हेरिन्छ ।
त्यसैले पनि धेरैले उनलाई एक राजनीतिज्ञ र खेलकुदमा सक्रिय व्यक्तिकै रूपमा चिन्छन् । धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, उनी एक अभिनेता, स्क्रिप्ट राइटर, निर्देशक पनि हुन् । यति मात्र कहाँ हो र ! उनी कुनै बेलाका तथ्याङ्क विभागका जागिरे हुन् भने जर्मनी पुगेर उनले सेल्समेनदेखि होलसेल व्यापारीसम्म बनेर काम गरेका छन् ।
कुरा गर्दै जाँदा यसअघि स्तम्भकारले थाहा पाएको भन्दा धेरै कुरा उनले खुलेर सुनाए ।
सुनसरीको इटहरीमा २३ फागुन २०२२ मा जन्मिएमा विष्ट स्थानीय जनता माविमा पढ्दा नाटक र खेलकुद गतिविधिमा भाग लिन छुटाउँदैनथे । सुरुमा नाच्नमा उनको रुचि असाध्यै थियो । ‘पहिलापहिला स्कुलमा खुबै नाचियो, पछि नाटक विधाप्रति रुचि बढ्दै गयो’, विष्ट भन्छन् ।
विद्यालयमा हरेक वर्ष सरस्वती पूजाको दिन आयोजना गरिने नाटकमा उनी सधैँ भाग लिन थाले । इटहरीको स्थापित जनजागृति क्लबले वर्षमा एक पटक आयोजना गर्ने नाटकमा पनि उनी भाग लिने गर्थे ।
२०३२ सालको कुरा हो । ६ कक्षामा पढ्दा पहिलो पटक उनले विजय मल्लले लेखेको ‘कोही किन बर्बाद होस्’ भन्ने नाटकमा अभिनय गर्नका लागि एक महिना रिहर्सल गरे । तर, दुर्भाग्य ! नाटक आयोजना हुनुभन्दा ४ दिनअघि उनको घाँटी बस्यो । त्यसपछि जुन भूमिका निर्वाह गर्ने मौका उनले पाएका थिए, त्यसमा तीर्थ कोइराला (हाल पत्रकार)ले अभिनय गरे ।
तीर्थ कोइराला र विष्ट एउटै विद्यालयमा पढेका थिए । पछि अभिनयसँगै नाटक लेखन र निर्देशनमा पनि विष्ट सक्रिय हुन थाले ।
उनको लेखन, निर्देशनमा पूर्वाञ्चलमै देखाइएको पहिलो नाटक हो, ‘बिछोडपछिको मिलन ।’ त्यसपछि उनैले लेखेको, निर्देशन तथा अभिनय गरेको ‘म समर्पित देशका लागि’ नाटक २०३९ सालमा मञ्चन गरिएको थियो ।
‘पहिलो नाटक बिछोडपछिको मिलन इटहरीकै एउटा स्कुलमा मञ्चन गरियो’, उनी भन्छन्, ‘म समर्पित देशका लागि’ नाटकचाँहि राजनीतिक चेत आइसकेपछि लेखेको हुँ ।’
केशव विष्ट राजनीतिज्ञ पनि हुन् । जनता स्कुलमै पढ्दा २०३६ सालबाट उनले विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेका थिए । उनले नगर कमिटीदेखि सुनसरी जिल्ला कमिटीसम्म पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर काम गरे । पदमा रहँदा उनले सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकुद गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्ने काम गरे ।
फिल्म भनेपछि हुरुक्कै
उनी फिल्म भनेपछि हुरुक्के हुन्थे रे ! त्यसैले फिल्म हेर्नका लागि घरबाट भागेर, स्कुलमा कक्षा छाडेर धरान, विराटनगर, जोगवनीदेखि सिलगढीसम्म पुग्थे ।
‘त्यसबेला फिल्म हेरेर आएपछि वरिपरि साथीहरूलाई राखेर कहानी सुनाउँथेँ । म डायलगहरू क्यारिकेचर गरेर सुनाउने भएकाले साथीहरू मेरो मुखबाट कहानी सुन्न आतुर हुन्थे’, विष्ट स्मरण गर्छन् ।
नेपाली फिल्म वर्षमा एउटा मात्र आउने भएकाले उनी अक्सर हिन्दी फिल्म हेर्थे । ‘सोले’ चलचित्र त उनलाई यति मनपरेछ कि हलमा गएर १२, ३ र ६ बजे गरी ३ वटै शो हेरेका थिए ।
‘सोले फिल्मको डायलग खुबै मनप¥यो । त्यो कण्ठ गर्नका लागि पनि एकै दिन मैले ३ पटक नै सोले हेरेँ’, उनी भन्छन् ।
त्यसो त कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्थ्यो, उनी एउटा फिल्म हेर्न भनेर हल जान्थे तर ३ वटा फिल्म हेरेर घर फर्किन्थे ।
अभिनेता बन्ने सपना
केशव विष्ट अभिनेता बन्न चाहन्थे । यही सपना लिएर २०४२ सालमा उनी काठमाडौं आए । इटहरीमै आईकम सकेका उनी काठमाडौंको पिपुल्स क्याम्पसमा बीकम भर्ना भए ।
‘निदाउन नदिने सपना’ पूरा गर्न उनले अभिनेता हरिहर शर्माको ‘द नेपाल थिएटर’मा ६ महिना तालिम लिए । ‘त्यसबेला मलगायत कलाकारहरू सुशील पोखरेल, निर्देशक नारायण पुरी, हेमन्त बुढाथोकी, शैलेश श्रेष्ठ, नरेन्द्र श्रेष्ठलगायतले एकसाथ प्रशिक्षण लिएका थियौँ,’ विष्ट सम्झिन्छन्, ‘तीमध्ये मलाई हरिहर शर्माले माया गर्नुहुन्थ्यो, अनुशासित ठान्नुहुन्थ्यो ।’
त्यसैले शर्माले विष्टलाई विजय मल्लको ‘अन्धोको पनि आँखा खुलेको हुन्छ’ भन्ने टेलिफिल्ममा सहायक निर्देशकको जिम्मेवारी दिए । हरिहर शर्माको मुख्य निर्देशनमा बनेको उक्त टेलिफिल्ममा विष्टले अभिनय पनि गरे ।
उनी टीका पहाडीको साथीको भूमिका देखिएका थिए, जो आँखाको डाक्टर हुन्छन् । विष्ट इटहरीका पहिलो व्यक्ति थिए, जो टेलिफिल्मबाट टीभीमा देखिए । त्यसैले टेलिफिल्म खेलेर घर फर्किंदा इटहरीमा उनको भव्य स्वागत गरिएको थियो ।
शर्माले बनाएका झन्डै आधा दर्जन टेलिफिल्ममा अभिनयसँगै सहायक निर्देशकको रूपमा विष्टले काम गरे ।
‘द नेपाल थिएटर’को उत्कृष्ट प्रशिक्षार्थीका रूपमा गनिने विष्टले लगातार ३ वर्ष तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा आयोजित राष्ट्रिय नाटक महोत्सवमा भाग लिए । त्यसबेला नाटक प्रतियोगिता हुन्थ्यो ।
पहिलो पटक उनले विजय मल्लले लेखेको ‘पुराण हराएको पाना’मा अभिनय गरे । ‘उक्त प्रतियोगितामा नायक स्व. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको समूहले बाजी मा¥यो, श्रेष्ठले उत्कृष्ट नायकको पुरस्कार पाउनुभयो’, विष्टले सम्झिए ।
त्यसबेला लेखन, निर्देशन र अभिनय गरेरै मात्र जीवन चलाउन कठिन थियो । तर, आफ्नो सपनाका अगाडि अभाव र दबाबलाई विष्टले गौण ठानेर काम गरे । उनी रोकिएनन्, रोकिने कुरा सोचेनन् पनि ।
बहुदल आएपछि २०४६ सालमा राष्ट्रिय नाचघरले नाटक प्रतियोगिता आयोजना ग¥यो । सोही प्रतियोगितामा मञ्चन गरिएको ‘टुक्रिएका रगतहरू’ भन्ने नाटकमा विष्टले ‘ड्रगिस्ट’को भूमिका निर्वाह गरेका थिए । सशक्त अभिनय गरेका उनले स्वर्ण पदक पाए ।
पछि कसरी बहुदल आयो भन्ने विषयमा ‘विद्रोह’ भन्ने नाटक निर्देशन गर्नुका साथै विष्टले त्यसमा अभिनय पनि गरे । काठमाडौंको खुलामञ्चसहित देशका प्रमुख शहरहरूमा उक्त नाटक देखाइएको थियो । त्यसबेलाको चर्चित नाटकहरूमा गनिन्छ, ‘विद्रोह ।’
२०४४ सालदेखि ०४८ सालको बीचमा उनले थुप्रै नाटक, टेलिफिल्ममा काम गरे ।
२०४८ सालमा नाटक ‘विकृत आकृतिहरू’ राष्ट्रिय सभागृहमा देखाइयो । उक्त नाटकमा विष्टले निर्देशनसँगै अभिनय पनि गरेका थिए । उनको मिहिनेत र कौशलको सम्मान गर्दै राष्ट्रिय नाट्य मञ्चले उनलाई त्यस वर्षको उत्कृष्ट नाटक निर्देशक घोषित ग¥यो ।
सोही वर्ष जनसांस्कृतिक मञ्चले ‘मिर्मिरेमा’ टेलिफिल्म बनायो । उक्त टेलिफिल्मको कथा विष्टले नै लेखेका थिए भने निर्देशन पनि उनैले गरेका थिए । टेलिफिल्ममा उनी शहीदको भूमिकामा देखिएका थिए । २०६३ सालभन्दा अगाडि हरेक वर्ष २४ चैतमा यो टेलिफिल्म नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिन्थ्यो ।
विष्टले साहित्यकार प्रदीप नेपालको ‘नओइलाउने फूल’ उपन्यासलाई १० भागको टेलिसिरियल बनाएका थिए ।
नाटक र टेलिफिल्म मात्र होइन, उनले ठूला पर्दामा समेत अभिनय गरे । चलचित्र ‘कर्मयोद्धा’मा विष्ट नायक सरोज खनालका बुबा अर्थात् खानीमा काम गर्ने मजदुरको भूमिकामा छन् ।
फिल्म पढ्न जर्मनी
फिल्म पढ्ने उद्देश्यले २०४८ सालमा उनी जर्मनीतिर हानिए । जर्मनीमा फिल्म पढेर नेपालमा धेरै कुरा गर्ने उनको योजना थियो । तर, उनको यस्तो योजनामा तब बज्रपात भयो, जब उनी जर्मनी पुगे र त्यहाँको अवस्था बुझे ।
उनलाई लागेको थियो( युरोपको समृद्ध देश जर्मनीमा अंग्रेजी भाषामै पढाइ हुन्छ । तर, वास्तविकता अर्कै थियो । त्यहाँ जर्मनी भाषामै पढ्नुपर्थ्यो। यसले उनलाई निराश मात्र पारेन, कठिन सङ्घर्षमा हालिदियो । ‘जर्मनी भाषा सरकारीमा ३ वर्ष सिक्नुपर्ने रहेछ । प्राइभेटमा पढ्दा ६ महिनामै हुने तर असाध्यै महँगो’, उनी स्मरण गर्छन् ।
नजानु गइसकेपछि यतिकै फर्किन उनको मनले मानेन । त्यसपछि दुःख गरेरै भए पनि केही समय जर्मनीमै बस्ने निधो गरे । उनले ६ महिना त काम खोजेरै बिताए । काम नपाउँदासम्म उनले साह्रै दुःख पनि काटे ।
‘यता (नेपालमा) सहायक निर्देशक बनेको मान्छे, परिवार पनि राम्रै थियो । सामाजिक काम गर्थें, इटहरीमा लोकप्रिय छवि थियो तर जर्मनी पुगेपछि जुन दुःख भोगेँ, त्यो मेरालागि चिरस्मरणीय छ’, विष्टले सम्झिए ।
जर्मनीमा उनले कति दिन भोकै गुजार्नुप¥यो, कति रात सडकमै सुत्नुप¥यो । बल्लबल्ल उनलाई एक जना पाकिस्तानी व्यापारीले सेल्समेनको रूपमा राखे । विष्ट गाडी कुदाउँथे, लाइसेन्स पनि थियो । त्यसैले गाडीमा लेदरको ज्याकेट लिएर पसलहरूमा बेच्न जान्थे ।
‘पाकिस्तानीकहाँ एक महिनाजति काम गरेपछि एउटा इन्डियनले मलाई आफैँ काम गर्न प्रस्ताव गरे’, विष्ट भन्छन्, ‘ती इन्डियनले मलाई एउटा गाडी दिए । अब म मालिक भएँ ।’
उनी जे सपना लिएर जर्मनी गएका थिए, त्योभन्दा बिलकुल फरक पेसा र गतिविधिमा व्यस्त भए ।
उनीभित्र एउटा कलाकार मात्र थिएन, सामाजिक कार्यकर्ता पनि थियो ।
जर्मनी बस्दासमेत उनी साङ्गठनिक गतिविधिमा संलग्न भए । मुलुकको राजनीतिप्रति उनको विशेष चासो थियो । त्यसैले त्यसबेलाका विमर्श, दृष्टिलगायतका राजनीतिक पत्रिका जर्मनी झिकाएरै पढ्थे । त्यहाँ बस्दाबस्दै उनले एमालेको पार्टी सम्पर्क कमिटी गठन गरे ।
‘त्यसबेला उक्त कमिटी पार्टीको नामसँग जोडिए पनि पार्टीबाट मान्यताप्राप्त थिएन, पछि पार्टीको औपचारिक कमिटी बन्यो । अहिले उक्त कमिटीबाट सन्तोष भट्टराई महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा नेपाल आउनुहुन्छ’, विष्ट भन्छन् ।
जर्मनीमा रहँदा उनले मनग्यै पैसा कमाएका थिए । तर, सामाजिक काममा सक्रिय भएकाले दुःख पाएका नेपालीलाई राहत, उद्धारलगायतका काममा व्यक्तिगत रूपमै आर्थिक सहयोग गर्थे ।
‘मेरोमा दैनिक ५/६ जना पाहुना रेगुलर नै हुन्थे’, विष्ट सम्झिन्छन्, ‘जागिर नपाएका साथीहरूलाई आफ्नैमा ल्याएर राख्थेँ, जागिर खोजिदिन्थेँ ।’
तैपनि, २ वर्ष जर्मनी बस्दा उनले ९/१० लाख रुपैयाँ जोगाए । २०५० सालमा उनी जर्मनी छाडेर स्वदेश फर्किएका थिए ।
तथ्याङ्क विभागमा जागिर
जर्मनीमा उनले जुन सङ्घर्ष गरे, त्यस्तै सङघर्ष उनले काठमाडौंमा पनि गरेका थिए । फरक यति हो, जर्मनी पराई देश थियो, काठमाडौं आफ्नै ।
२०४५ सालमा करार सेवामा तथ्याङ्क विभागको नायव सुब्बाका रूपमा उनले जागिर सुरु गरे । एकातिर अभिनेता बन्ने सपना, अर्कातिर काठमाडौंमा टिक्नुपर्र्ने बाध्यता । उनी बिहान क्याम्पस जान्थे, दिउँसो जागिर र साँझ रिहर्सलका लागि समय छुट्याउँथे । युवा अवस्थामा अत्यन्तै व्यस्त थिए उनी । ‘सुरुवाती दिनमा काठमाडौंमा पनि मैले कठिन सङ्घर्ष गरेँ’, विष्ट सम्झिन्छन् ।
उनको रुचि खेलतिर पनि थियो । कुनै सरकारी निकायमा पहिलो पटक खेलकुद प्रतियोगिता गराउने व्यक्ति पनि केशव विष्ट नै थिए ।
‘तथ्याङ्क विभागमा खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने प्रस्ताव गर्दा हल्ला भयो, यो कुरा प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहसम्म पुगेछ, उहाँले पनि हुन्छ भनेपछि पहिलो पटक कुनै सरकारी कार्यालयमा खेलकुद प्रतियोगिता भयो’, विष्ट भन्छन् ।
तथ्याङ्क विभागमा ३ वर्ष काम गरेपछि २०४८ सालमा उनले जागिर छाडे । जागिर छाड्न हुत्याउने पनि उनकै सपना थियो । फिल्म पढ्न जर्मनी जानका लागि उनले जागिर छाडेका थिए ।
यति मात्र कहाँ हो र ! आफ्नो सपना पूरा गर्ने प्रयासमा उनले २०३६ सालदेखिको राजनीतिक जीवनलाई समेत केही समय विश्राम दिएका थिए । उनी करिब ३ वर्ष राजनीतिमा निस्क्रिय भए ।
जर्मनीबाट फर्किएपछि उनले फेरि कलाकारिता सुरु गरे । २०५१ सालदेखि २०५३ सालसम्म नाटक र टेलिफिल्ममा काम गरे ।
‘हिरो हुने सपना थियो तर सकिनँ’, विष्ट भन्छन्, ‘भिलेन हुने उमेर थिएन । फिल्मतिर खासै ठूलो भूमिका पाइएन । दुःख मात्र हुने भयो । छोराछोरी भइसकेको मान्छे यसरी बरालिएर हुँदैन भन्ने लागेर २०५३ सालमा काठमाडौं छाडेर इटहरी फर्किएँ ।’
घर फर्किएर पनि कलाकारिता
उनी इटहरीमा लोकप्रिय थिए । त्यहाँ पुगेको एक हप्तामै तत्कालीन एमालेको भ्रातृ संस्था युवा संघको नगर कमिटी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाए । तर, कालाकारिताको नशा उनीबाट उत्रिइसकेको थिएन । युवा संघ नगर कमिटी अध्यक्ष हुँदा उनले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गरिरहन्थे, नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन गर्थे ।
त्यसबेला केशव विष्टलगायतका व्यक्तिले गरेका कार्यक्रम र पहलबाट नै सुरेन्द्र तामाङ, रितेश तामाङ, दिवश राईलगायतका खेलाडी जन्मिए ।
विष्टमा नेतृत्व क्षमता पनि अब्बल थियो । इटहरीमा उनले पार्टीभन्दा युवा सङ्गठनलाई बलियो पारिदिए । राजनीतिमा सक्रियताका बाबजुद उनले मोरङको विराटचोकमा सुकुना चलचित्र मन्दिर (फिल्म हल) बनाए ।
रेखा थापाको १३ टेक
२०५६ सालमा सिनेमा हल बनाउँदै गर्दाको कुरा हो । विराटचोकका मोहन साहले टेलिफिल्म बनाउने योजना बनाए । उनलाई कुशल निर्देशक चाहिएको थियो । बुझ्दै जाँदा धेरैले केशव विष्टलाई प्रस्ताव गर्न सुझाव दिए । साहले प्रस्ताव गरे । तर, विष्टले भनिदिए, ‘मैले यो क्षेत्र छाडिसकेँ, अरू कसैलाई भन्नुहोला ।’
तर, साहले पटकपटक आग्रह गरेपछि उनले कथा हेरे र निर्देशनका लागि तयार भए । पुष्प श्रेष्ठ हिरो र कविता गेलाल हिरोइनको भूमिकामा रहेको २ भागको उक्त टेलिफिल्मको नाम थियो, ‘उज्यालो अभिव्यक्ति ।’
अहिलेकी चर्चित नायिक एवं राप्रपा केन्द्रीय सदस्य रेखा थापा पहिलो पटक निर्देशक केशव विष्टको अगाडि क्यामेरा फेस गर्दै थिइन् । तराईको ठाउँ, निकै तातो घाम थियो ।
८ कक्षामा पढ्ने रेखाको २(३ मिनेटको सिन थियो । उनले ट्युबेलको पानी गाग्रीमा खन्याउँदै साथीहरूसँग संवाद गर्नुपर्ने थियो । ती साथीहरूमध्ये उनी मुख्य भूमिकामा थिइन् । तर, रेखाको हाउभाउ र टाइमिङ नमिलेपछि विष्टले १२औँ टेकसम्म स्वीकार गर्न मानेनन् ।
‘चर्को घाम थियो, पहिलो पटक क्यामेरा अगाडि भएर हुन सक्छ रेखा अलिक नर्भस भएकी थिइन् । मैले १३औँ टेक ओके गरिदिएँ, यस पटक उनले अलिक राम्रो गरेकी थिइन्’, विष्ट सम्झिन्छन् ।
पूर्वका चर्चित गायक श्रीकृष्ण लुइँटेल ‘बोकेदारी’लाई पहिलो पटक टेलिफिल्म खेलाउने व्यक्ति पनि केशव विष्ट नै हुन् ।
केशव विष्ट भलिबल र ब्याटमिन्टनका राम्रा खेलाडी हुन् । उनी सानैदेखि क्लब बनाउने र खेलकुद गतिविधिमा सक्रिय थिए । २०५४ सालमा इटहरी नगरपालिका खेलकुद विकास समितिको संयोजक भएका उनी २०५६ सालमा जिल्ला खेलकुद विकास समिति सुनसरीको उपाध्यक्ष, २०६३ सालमा पूर्वाञ्चल खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष भए ।
उनी २०६४ सालमा नेपाल खेलकुद महासंघको केन्द्रीय सदस्य हुँदै २०७० सालमा उपाध्यक्ष भएका थिए । २०७१ मा कार्यवाहक अध्यक्ष बने । १० असार २०७२ देखि ९ असार २०७६ सम्म उनी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव भएका थिए ।
तुलनात्मक रूपमा विगतभन्दा नेपालको कला क्षेत्र केही अगाडि बढेको विष्टको बुझाइ छ । यद्यपि, नेपाली चलचित्रमा भएको प्रगतिलाई भने उनी सन्तोषजनक मान्दैनन् ।
‘हामीभन्दा कम विकसित मुलुकका चलचित्र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ’, विष्टले भने, ‘हाम्रोमा क्वान्टिटी धेरै भयो तर क्वालिटी कम भयो ।’
रहरले फिल्म बनाउने, खेल्ने होडले नेपालको फिल्म उद्योग अझै सुरक्षित हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।
व्यावसायिक हिसाबले कमजोर भए पनि विशेष स्वादचाहिँ नाटकमै रहेको विष्टको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘नाटकका खासै धेरै दर्शक छैनन्, यो व्यावसायिक पनि बन्न सकेको छैन तर नाटकले भित्र छुन्छ, त्यसैले म अहिले फिल्मभन्दा नाटक नै हेर्न रुचाउँछु ।’
केशव विष्टभित्रको कलाकारिता अझै जीवित छ । विगतमा उनले लेखेका नाटक अहिले पनि डायरीमा छन् । प्रेम चन्दको कथालाई समेटेर उनले एउटा नाटक मञ्चनका लागि तयार गरेर राखेका थिए । विविध कारणले सकेनन् । आगामी दिनमा केही नाटकमा काम गर्ने उनको योजना छ ।
उनी एउटा उत्कृष्ट फिल्म पनि बनाउन चाहन्छन् । ‘बीचमा धेरै नै व्यस्त भइयो । कलाकारिताका लागि समय दिन पाइएन’, उनी भन्छन्, ‘व्यस्तता त अहिले पनि घटेको छैन तर कलाकारिताका लागि केही समय छुट्याउने योजना छ ।’
इटहरी अहिले लकडाउनमा छ । स्थिति सहज भएपछि उनी नाटकको काम अगाडि बढाउने योजनामा छन् ।शिलापत्रबाट